Maoritania - Wikipedia
I Maoritania dia firenena ao amin' ny tapany avaratra ao Afrika Andrefana, izay manana morontsirana ao amin’ ny Ranomasimbe Atlantika, manana velaran-tany mirefy 1 031 000 km²,
I Maoritania dia tany ihaoanan’ i Magreba sy i Afrika Mainty. Be tany efitra i Maoritania: ny 2/3n’ ny taniny dia ao amin’ ny tany efitr’ i Sahara. Mahatratra 38 °C ny hafanana mandritra ny enim-bolana mahery amin’ ny andro fa ny alina kosa dia mangatsiatsiaka. Manana toetany antonony kosa ny faritra a-morontsiraka.
Ny mponin’ i Maoritania dia ahitana Arabo-Berbera (izay atao hoe Maora) sy Afrikana mainty hoditra. Monina an-tanàn-dehibe ny antsasaky ny mponina na dia mbola manjaka ny fonenana ambanivohitra sy ny fifindrafidrà-monina anatiny. Saika ny vahoaka maoritaniana rehetra no manaraka ny fivavahana silamo.
Miompana amin’ ny fiompiana andiam-biby fiompy ny toekaren’ i Maoritania. Mandroso ny fifanakalozana eo ammin’ ny faritra avaratra karankaina sy ny faritra atsimo be hivoka ao amin’ io firenena io. Tsy hita ny fambolena raha tsy amin’ ireo toerana lonaka afovoan’ ny tany efitra (ôazisy) sy amin’ ny farirta atsimo. Na dia izany aza dia ianjadian’ ny haintany sy ny fitomboan’ ny tany efitra ny fambolena any. Anisan’ ny mampidi-bola any koa ny fitrandrahana ny harena an-kibon’ ny tany (ny vy) sy ny raharaham-barotra ary ny jono.
Ny fiteny arabo hasania sy ny fiteny oôlôfo no fiteny ôfisialy any Maoritania.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Maoritania&oldid=1040809"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 15:16
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:16 ity pejy ity.